के हो ग्याङ अफ डस्टर्स ? | Automotive News Nepal
के हो ग्याङ अफ डस्टर्स ? ७ मंसिर, २०७७
काठमाडौं – गाडी निर्माता कम्पनी ‘रेनो’ को आफ्नो साहसिक यात्रा समूहको नाम हो ‘ग्याङ अफ डस्टर्स’ । कोभिड–१९ का कारण विभिन्न अटोमोबाइल सम्बद्ध खेलकुद वा ¥याली नभएको समयमा हाल धेरैले रेनोको सो इभेन्टलाई पनि सम्झेका छन् ।
तीन वर्ष पहिले भारतको लखनउबाट यात्रा प्रारम्भ गरी सो समूह काठमाडौं समेत आएको थियो । काठमाडौं आएको उक्त समुह पोखराका लागि प्रस्थान गरेको थियो । ग्याङ अफ डस्टर्समा २४ वटा रेनो डस्टर गाडी सम्मिलित थिए ।
२०७४ कात्तिक २४ गते भारतको लखनउबाट यात्रा प्रारम्भ गरेको सो समूह भारतको लखनउ हुँदै नेपाल प्रवेश गरेको थियो । ग्याङ अफ डस्टर्स पोखरा, चितवन र लुम्बिनी हुँदै त्यसपछि पुनः लखनउ फर्केको थियो ।
ग्याङ अफ डस्टर्सको ९ दिने सशक्त यात्रा करिब १४ सय किलोमिटरको थियो । नेपालमा रेनो गाडीको आधिकारिक वितरक एड्भान्स अटोमोबाइल्सका प्रबन्ध निर्देशक निकुन्ज अग्रवालले सो समूहलाई स्वागत गरेका थिए । त्यही समयमै नेपालमा पनि १ हजार भन्दा बढी रेनो डस्टर गुडिरहेका र आगामी दिनमा नेपालमा समेत यस्तै कार्यक्रम आयोजना गरिने उनले बताएका थिए ।
ग्याङ अफ डस्टर्सका सहभागीहरुले नेपालको प्राकृतिक सुन्दरताको अवलोकन गर्ने अवसर पाएका थिए । उनीहरुले काठमाडौंका सांस्कृतिक सम्पदाहरु हेरेका थिए भने पोखराको प्राकृतिक परिदृश्य र चितवनका बन्यजन्तु तथा विविध दृश्य हेर्न पाएका थिए । उनीहरु अन्य डस्टर धनीहरुसँग भेटघाट गर्ने र अनुभव साटासाट गर्ने, ऐतिहासिक क्षेत्रहरु घुम्ने, मोटरस्पोर्टका विज्ञहरुसँग कुराकानी गर्ने, विभिन्न भूगोलको अफरोड अनुभव गर्ने र माउन्टेन बाइकिङ तथा बोट राइडिङ लगायतका साहसिक खेलमा पनि सहभागी भएका थिए ।
डस्टर रेनो कम्पनीद्वारा उत्पादित स्पोर्ट युटिलिटी भेइकल (एसयूभी) हो । रेनो धनीहरुका बीच पारिवारिक सम्बन्ध कायम गर्नका लागि भारतमा ग्याङ अफ डस्टर्सको स्थापना गरिएको छ । ग्याङ अफ डस्टर्समा त्यतिबेलै १ लाख भन्दा बढी सदस्य सहभागी भइसकेको कम्पनीले जानकारी दिएको थियो ।
यो डस्टर धनीहरुलाई रेनो परिवारमा सामेल गराउने एउटा उत्कृष्ट माध्यम हो भने सदस्यहरुका माझमा सम्बन्ध निर्माण गर्ने माध्यम पनि हो । भारतमा सर्बाधिक रुचाइएको एसयूभी दाबी गरिने डस्टरमा निकै चुनौतीपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रहरु पार गर्न सक्ने क्षमता छ । ग्याङ अफ डस्टर्सले यात्रा गर्न रुचाउनेहरुका लागि अतुलनिय र अप्रतिस्पर्धात्मक मोटरिङ अनुभव गराउछ ।
भारतकै सस्तो सब कम्प्याक्ट एसयूभी बताइएको रेनो काइगर यस्तो देखियो टिजरमा
फ्रान्सको अटोमोबाइल कम्पनी रेनोले भारतीय बजारमा २८ जनवरीमा रेनो काइगर सार्वजनिक...
यस्तो हुनेछ रेनो काइगर, टिजर सार्वजनिक
रेनो इन्डियाको बहुप्रतीक्षित कार रेनो काइगरको टिजर सार्वजनिक भएको छ । सो टिजर ट्...
काठमाडौं - अनलाइन ट्याक्सी बुकिङ एप ट्याक्सीमाण्डुले आफ्नो स्थापनाको १ वर्ष पुरा...